Zingaphi iintlanzi onokuthi ube nazo kwi-aquarium? Ngeentlanzi
Xa uthenga i-aquarium uyazi ukuba kukho iintlobo ezahlukeneyo, ukusukela kweyona ilitha incinci ukuya kwiilwandle ezinkulu ezifuna itafile yazo kwaye onokuthi ube neqela elikhulu leentlanzi kunye nezityalo, indawo yokuhlala encinci yithi, ngoku siphinda sisebenzise ubomi beentlanzi.
Nangona kunjalo, enye yeenkcukacha esingayi kuwa kuzo xa uthenga i-aquarium yile, Zingaphi iintlanzi esinokuzifaka kuyo? Kuba, ii-aquariums, nokuba zinkulu, kufuneka sihlale sijonge kwikamva kuba iintlanzi esizithengayo ezivenkileni zincinci kwaye zihlala zikhula, okuthetha ukuba kufuneka ubanike indawo yokwenza njalo.
Kwimeko yam, i-aquarium endinayo yile 60 litros kwaye kuyo umntu ophetheyo wandicebisa musa ukubeka ngaphezulu kwe-10-12 yeentlanzi nokuba zincinci kuba xa ndinazo bendizokwazi ukwanela kwaye kuya kuxhomekeka kwindidi esifuna ukuba nayo (kuya kufuneka uyazi ukuba ezinye iintlanzi azinakuba kunye). Injalo imeko, kwaye ngolawulo oluncinci lwesithathu, kunokwenzeka ukuba wazi ukuba zingaphi iintlanzi oza kuba nazo kwiindawo zakho zasemanzini.
Oku kuyenziwa kwimeko yokuba uneentsana (ezinokwenzeka ungakhange uziqonde kwasekuqaleni). Ayisiyiyo yonke intlanzi eza kukuphakamisa, kodwa kukho ezinye iintlobo ekulula ukuzikhulisa.
Nje ukuba uyazi intlanzi onokuthi ube nayo Kuya kuba lula kakhulu kuwe ukuthatha isigqibo sokuba ufuna ukuba zingaphi kuhlobo ngalunye Ukucebisa malunga nokuba bangaba kunye okanye hayi. Nokuba ubona iilwandle ezininzi zentlanzi ezimbalwa, kunye ezincinci, ngokuhamba kwexesha uya kubona ukuba zihlala zikhula kwaye zikhula.
Ukuba uneentlanzi ezininzi, akukho nto yenzekayo nokuba, ayisiyomthetho kodwa ukuba bonke bayasinda kuwe, mhlawumbi xa bekhulile kungcono ukubahlula kuba abazukufumana sithuba sikhulu kwi-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Zingaphi iintlanzi onokuthi ube nazo kwi-aquarium?
Ungayondla nini intlanzi